Fanajariana ny tany : mitsinjo ny 15 taona ho avy ny kaominina Vinaninkarena | NewsMada
Mpamboly sy mpiompy, toy ny any amin’ny kaominina ambanivohitra hafa, ny 95%-n’ny mponina ao Vinaninkarena, distrikan’Antsirabe II. 15.000 ny isan’ny mponina ao amin’io kaominina io miparitaka any amin’ireo fokontany fito mandrafitra azy. “Mitombo tsy mitsahatra ny isan’ny tantsaha, nefa mihakely tsy maharaka izany intsony ny velaran-tany azon’izy ireo hajariana isan-taona. Mazava ho azy fa mihena manaraka izany koa ny vokatra miakatra isan-taona, izay misy fiantraikany amin’ny vola miditra isam-pianakaviana”, hoy ny ben’ny Tanàna, Rasolofonirina Stéphanoël.
Manoloana izany, mijery lavitra ny any amin’ny 15 taona ho avy ny kaominina Vinaninkarena. “Hampitomboana ny velaran-tany hohajarian’ny isam-pianakaviana amin’ny alalan’ny fandaharanasa Matoy”, hoy ny ben’ny Tanàna. Kaominina Vinaninkarena ao anatin’ny Organisme Public de coopération inter-communale (OPCI), misy ny fandaharanasa Matoy. Noho izany, azo atao ny manao sarin-tany vaovao hahazoana mampitombo ny velaran-tany hohajariana.
Hiandraikitra izany ny sampandraharaham-paritra misahana ny fanajariana ny tany, miainga avy amin’ny vinavinan’ny kaominina ho an’ny 15 taona ho avy. Hamatsy ara-bola sy ny fanaraha-maso rehetra ny fandaharanasa Matoy. Tsy hanana olana momba ny tany intsony ireo tantsaha ao Vinaninkarena hatramin’ny taona 2030.